Fanapahankevitra 2016: Fandanjàna Fahavoazana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Novambra 2016 17:44 GMT
Nitàna anjara andraikitra rahateo koa ny fianakaviana mpidongy toerana politika, na “establishment”, tamin'ny fahaterahan'ny toedraharaha misy amin'izao fotoana izao. Ny fitarihana ny antoko Demaokraty — nampian'ireo solontena ambony sy ny lazaina fa lalao ratsy nataon'ny ampahany tamin'ny Kaomity Nasionaly Demoakraty nandritry ny fifidianana savaranonando izay nanome tombony an'i Hillary Clinton — nisompatra ny vintan'i Sanders tsy hahazo bàhana tsara ho lasa safidy atolotry ny antoko demaokraty. Tetsy amin'ny lafiny ilany, ny “establishment” Repoblikàna, ambany fitarihan'ny fianakaviana Bush, tsy nahavita nanangana fanamby azo ianteherana tamin'ny kandidà iray, izay ny fampielezankeviny dia tsy nisy afa-tsy fanevatevàna, fankahalàna vehivavy, tsy fitiavana vahiny ary politika mampihomehy toy ny fananganana rindrina iray mitomandavana manaraka ny sisintany manasaraka an'i Meksika sy Etazonia. Samy afaka nanatsahatra ny firodorodon'ilay voaiben'ny fanorenan-trano daholo, na i John Kasich, na Ted Cruz na Marco Rubio— ity farany izay heverina ho nanavotra ny antoko Repoblikàna tamin'ny fotoan'andro.
Taorian'ny fampielezankevitra ho an'ny fifidianana, izay nahafanina tokoa, ny hany zavatra sisa tavela ho ataon'i Etazonia dia ny mandanja ny fahavoazany. Somary mivoaka kely amin'ny fanontaniana hoe iza no nandresy tamin'ny fifidianana, mbola manindrona lavitra noho ny hatrizay ny olana amin'ny maha-mpikambana anaty antoko ao Washington, noho ny fisian'ny “iron triangle” (telozoro vy) mampitambatra ireo tombontsoa politika izay mitantana ny hoavin'ny firenena.